घटस्थापनाको साइत आज ११ः४६ बजे – ThePressNepal
घटस्थापनाको साइत आज ११ः४६ बजे
प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा देखि शुरु हुने नेपालीको महान पर्व विजया दशमी भोलिदेखि सुरु हुँदै छ ।
आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन दुर्गापक्षमा धूमधामका साथ मनाइने दशैंको पहिलो दिन घरघरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना गरिन्छ ।
नवरात्रको पहिलो दिन आज बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजाकोठामा विधिपूर्पक राखेर त्यसमाथि यव (जौ)रोपिन्छ । यव अङ्कुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा ग्रहण गरिन्छ ।
जमरा राख्ने कार्यमा जौबाहेक अरू अन्न रोप्ने शास्त्रीय विधि नभएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले बताए । कुल परम्परानुसार कसैले अन्य अन्न पनि जौसितै रोप्ने गरेका छन् । जमरालाई आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ ।
घटस्थापनाको साइत शनिबार बिहान ११ः४६ बजे रहेको समितिले जनाएको छ । घटस्थापनाका दिनभर चित्रा नक्षत्र परेकाले शास्त्रीय वचनानुसार मध्याह्नकालमा अभिजित मुहूर्तको साइत घटस्थापनाका लागि दिइएको अध्यक्ष गौतमले बताए ।
Previous सरकारलाई काँग्रेसको प्रश्न – २६ सय भेन्टिलेटरमा २ सय र हजार आइसियुमा ५० बिरामी हुदाँ भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव कसरी भयो ?
Next बैंकहरूले कर्जामा तोकेको स्थिर ब्याजदर, हेर्नुहोस् कसको कति